Qalab loo isticmaalo shiididda haramaha oo u jajabiya ubaxa xashiishka qaybo yaryar oo loogu talagalay kala -goysyada, baalasheeda, iyo maddiibadaha. Nuugga dhig inta u dhexeysa ilkaha Furimaha cawska, ka dibna ku marooji dusha sare iyo hoose ee Furimaha Furimaha dhinacyo ka soo horjeeda si aad u jebiso ubaxa. Booqdayaasha geedaha waxaa ku jiri kara kief ca ...
Waa Maxay Booqday iyo Sideed ugu Isticmaashaa Xashiishadda?
Grinder buuxiyey burooyin (Leafly) Haddii aad ku cusub tahay xashiishadda, waxaa laga yaabaa inaad dhawr su'aalood ka qabtid mashiinka wax lagu shiido iyo sida loo isticmaalo mid. Griinleyda waxaa laga iibsan karaa ku dhawaad ​​dukaan kasta oo qiiqa ama dukaanka madaxa, ama waxaad ka dalban kartaa mid online ah dukaamada tafaariiqda ee kala duwan. Waxay noqon karaan kuwo fudud sida kaarka shiidi kara (l ...
Waa maxay sababta loo isticmaalo Furimaha wax lagu shiido?
Booqashooyinka dhirtu waa aaladaha lagama maarmaanka u ah qofka sigaarka caba ee soo noqnoqda. Haddii aad kor u ruxayso, ku urursanayso baaquli boong -ka aad ugu jeceshahay ama aad qaaddo qaaddo jeebka ah, shiid joogto ah ayaa lama huraan u ah qiiqa ugu fiican. Wershadleyda ayaa sidoo kale u saamaxaysa dadka sigaarka cabba inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan ​​...
3 Sababood oo Waaweyn oo Loo Adeegsado Furimaha Dhirta si aad u Burburiso Budadaada
JOOJIYOOYINKA UGU WANAAGSAN WAXAY KA BILAABANYIHIIN DAWASHADA UGU FIICAN Meeshaan, waxaan jecelnahay inaan nidhaahno “Kulan walba waa inuu ku bilowdaa SLX” taasina waa runta! Haddii aad doorbideyso inaad geedahaaga ku raaxaysato caag ama afxumo, tuubo ama warqad, iyo gaar ahaan haddii aad dooratid inaad isticmaasho uumiga uumiga, isticmaalka habboon ee ...